आफ्नो मानिस विवाह गर्न कसरी व्यावहारिक सल्लाह
पक्कै पनि यो प्रश्न आफ्नो मानिस कसरी विवाह गर्न एक महिला सोधे छैन? अझै पनि, सबै मानिसहरू आफ्नो जीवनको सबैभन्दा एक स्नातक, एक महिला एक परिवार छ चाहँदा एक समयमा आयोजित तयार छन् पछि, छोराछोरी र आफ्नो प्यारो मानिसको संग कहिल्यै पछि खुसीसाथ बाँचिरहेका छौं। तपाईं शायद अंदाजा गर्नुभएको रूपमा, तपाईं, प्रिय स्त्रीको हातमा अग्रसरता लिन। विशेष गरी कुनै हतारमा एक मानिस एक विवाह प्रस्ताव बनाउन गर्दा।
तपाईं आफ्नो मानिस कसरी विवाह गर्न बुझ्न मदत गर्न केही व्यावहारिक सुझाव, छैन पहिलो comer छ, र धेरै, एकमात्र, प्रिय र अद्वितीय। बलियो प्रेम, यौन सम्बन्ध, आपसी समझ, भरोसा, आदि: सबै पछि, एक परिवार सिर्जना, कि गर्नुपर्छ आधा युद्धमा, यो महत्त्वपूर्ण यो सबै ठाँउ थियो छ
सौन्दर्य अझै पनि भयानक शक्ति
, भन्न अनावश्यक मानिसहरू प्रेम आँखा। तिनीहरूले ती महिला अधिकार मेकअप गर्न, आफूलाई हेरचाह गर्न सक्षम छन् जो थप ध्यान सुन्दर र स्टाइलिश लुगा किन्न। पहिले नै पुरुष मस्तिष्क सुरु निहित प्रकृति आफ्नो दृश्य धारणा भन्दा धेरै पछि काम गर्न। निष्कर्ष सरल छ, तपाईं आफैलाई विवाह गर्न कसरी त्यसपछि ऐनामा हेर्न बुझ्न चाहन्छु। हरेक दिन, तपाईं उज्ज्वल, सुन्दर, आकर्षक आफूलाई र आफ्नो क्षमता मा विश्वास छ जो महिला को प्रतिबिम्ब हेर्नुपर्छ। एक महिला एक आमा मा छैन गरिएका गर्नुपर्छ र बन्द नै। उहाँले सधैं रानी आफ्नो आँखा मा हेर्न भनेर एक पाउनुहुनेछ किनभने, मानिस जस्तै हेर्न चाहनु असम्भाव्य छ।
भरोसा र आपसी समझ
तपाईं र तपाईंको बीच प्रिय कुनै रहस्य र innuendo हुनुपर्छ। तपाईं उसलाई आफ्नो जीवनको बाँकी खर्च गर्न जाँदैछन् भने किन कुरा लुकाउन। तपाईंको आपसी भावना लागि महसुस गर्ने एउटा मानिस यो सबैभन्दा सुखद छैन पनि भने, आफ्नो हरेक शब्द लिनुपर्छ। अझै रहस्य आफ्नो समग्र सम्बन्ध मात्र सम्बन्धित, कुनै एक तपाईं महिलाहरु को लागि आफ्नो रहस्य केही गर्न मनाही र तिनीहरूले आफ्नो प्रेमको लडी गर्न अवरोध हुनु हुँदैन।
आफ्नो मान्छे यो छ के को लागि एक प्रेम एक लिन विवाह गर्न कसरी को प्रश्नको जवाफ पाउन। यसलाई रुचि गरौं आफ्नो नङ क्षति गर्न, उहाँले सूप घृणा र सधैं घर मेरो कुरा फेंकता। पक्कै पनि केही क्षण तपाईं पनि कष्टप्रद किनभने बस, यो सामना। प्रारम्भिक मा सम्बन्ध मा, तपाईं सबै दुखेको स्थलहरू छलफल र एक साधारण नतिजा आउन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं सबै आफ्नो मुक्त समय को लागि लागू छैन कि मानिस बताउन, र त्यो साथीहरूसँग भेट्न उहाँलाई निषेध गर्न जाँदै छ। साथै, आफ्नो प्रेम एक आफ्नो अधिकार उल्लंघन हुँदैन। यसरी, कि के विवाह गर्न छोटो समयमा तपाईंलाई मदत गर्नेछ छ, साधारण जमीन खोज्छन्।
प्रिय भन्दा बढी
प्रेमले परम भावना छ भन्ने लाग्छ? यो तर्क गर्न गाह्रो छ, तर आफ्नो मानिस विवाह गर्न रूपमा पनि सानो छ कहिलेकाहीं प्रेम - त्यसपछि उहाँलाई न्यानो भावना भन्दा बढी केहि दिन। , दखल बिना उहाँलाई सुन्न गर्न whims र सहन, कठिन समयमा समर्थन गर्न सक्षम हुनेछ मानिस को लागि एक मानिस बन्न खराब मुड, र एक कठिन अवस्था बाहिर तरिका दिन, आदि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ केही परिस्थितिमा प्रतिस्थापन गर्न, आफ्नो आमा, एक सर्वश्रेष्ठ मित्र, एक बहिनी, काम र धेरै अन्य एक सहयोगी। यो एक मानिस जहिले पनि फिर्ता तपाईं कहाँ छन् प्राप्त गर्न हतारमा छ कि महत्त्वपूर्ण छ।
बिना सेक्स बस कहीं
तपाईं शायद पहिले नै मान्छे वा एक मानिस कसरी विवाह गर्न बाहिर समझ गर्नुभएको छ। तपाईंको सेक्स जीवन: तर एउटा कुरा ध्यान। यसलाई विचार गर्नुहोस्: यो एक स्थिर र तीव्र र बस तपाईं को एक कसैलाई हुनुपर्छ। र तपाईं चिन्ता छैन, ओछ्यानमा आफैलाई एक सानो बदमास अनुमति पनि भने, आफ्नो मान्छे मात्र पनि इच्छुक हुनेछ। बोरिंग सेक्स धेरै अक्सर contention को हड्डी दुई मनपर्ने पुरुष बीच।
खैर, म आशा मेरो सुझाव उहाँले उसलाई आनन्द कसरी नजिक बुझे एक पटक तपाईं बाहिर बाटो, र आफ्नो मान्छे फेला पार्न मद्दत गर्नेछ, तपाईं एउटा प्रस्ताव बनाउन र तपाईंले विवाह। यो आफ्नै हातमा सबै अग्रसर सर्वश्रेष्ठ छ त र, सम्झना, केही कटिबद्ध मानिसहरू। र तपाईं उसलाई एउटा प्रस्ताव आफूलाई बनाउन सक्छ? किन? कम से कम मानिस बस उम्कन हुनेछ छ: हामी छनौट गर्न छौँ!
विवाह महल को सैर des एङ्गलियस मा - सेन्ट पीटर्सबर्ग एक मनपर्ने ठाउँ नवविवाहितहरूका
आफ्नो सपना को विवाह कसरी व्यवस्थित गर्ने?
विवाह सजावट: चलन 2017
कनिष्ठताको शब्दावली: पति को पति को पत्नी को पिता को हो?
Calico विवाह: लिपि। Calico विवाह: बधाई छ, उपहार
कसरी बैग मा आलु रोपेर गर्न? बैग मा आलु बढ्दै
मास्कोमा सबैभन्दा राम्रो ओथथोमोलोजिस्ट: समीक्षा, क्लिनिकहरू, दायित्वहरू र समीक्षाहरू
युद्ध वृद्धहरुको को भुक्तानी
वायवीय सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार शिकार
संघीय marketplaces: एक सूची। इलेक्ट्रोनिक व्यापार मञ्चहरूमा
अमेरिकी व्यावसायिक बास्केटबल खेलाडी Chonsi Billaps: जीवनी, खेल क्यारियर
मासिक लागि घाँस nard
Citroen GT: को वाहक मा खेल
केमेरोवो क्षेत्रको रातो पुस्तक: जनावरहरू, बिरुवाहरू। केमेरोवो क्षेत्रको रिजर्भेसन
प्रोस्टेट क्यान्सर उपचार इस्राएलमा - चिकित्सा जित्ने